Nofitahina i FAA hanamarina ny Boeing 737 MAX: fiampangana heloka bevava an'ny Grand jury
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nofitahina i FAA hanamarina ny Boeing 737 MAX: fiampangana heloka bevava an'ny Grand jury
Airlines • Aviation • Vaovao • People • Safety • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny mpitsara lehibe federaly any amin'ny Distrikan'ny Avaratry Texas dia nametraka fitoriana anio izay niampanga ny Lehiben'ny mpanamory teknika taloha ho an'ny orinasa Boeing (Boeing) tamin'ny famitahana ny Vondrona fanombanana fiaramanidina an'ny fiaramanidina federaly (FAA AEG) mifandraika amin'ny fanombanan'ny FAA AEG ny Boeing's 737 Fiaramanidina MAX, ary tetika hamitahana ny mpanjifa an'habakabaka Boeing any Etazonia hahazoana vola am-polony tapitrisa dolara ho an'ny Boeing.
Ny Etihiopian Airlines sy ny Lion Air Murder dia manana anarana hoe: Voampanga ho lehiben'ny mpanamory teknika Boeing, Mark A. Forkner?
Tamin'ny 28 Oktobra 2018, Lion Air Boeing 737 MAX nianjera ary namono 189.
Tamin'ny 10 martsa 2019, nisy fiaramanidina fiaramanidina Etiopiana Boeing 737 MAX nianjera ary maty 157.
Tamin'ny 14 Oktobra 2021, ny lehiben'ny mpanamory fiaramanidina Boeing Mark A. Forkner dia voampanga tany Etazonia noho ny famitahany ny FAA tamin'ny fanomezan-dàlana ny fanamarinana ny Boeing MAX 737. Boeing dia nitahiry vola an-tapitrisany tapitrisa tamin'ity hitsin-dàlana fanamarinana ity.
Araka ny antontan-taratasim-pitsarana napetraka tao amin'ny Distrika Avaratry ny Fitsarana Federaly Texas, Mark A. Forkner, 49 taona, avy ao amin'ny State Washington ary ankehitriny dia any Keller, Texas, dia voalaza fa namitaka ny FAA AEG nandritra ny fanombanana sy ny fanamarinana nataon'ny fiaramanidina Boeing 737 MAX.
Araka ny voalaza tao amin'ny fiampangana azy, Forkner dia nanome fampahalalana diso sy tsy marina ary tsy feno momba ny ampahany vaovao amin'ny fifehezana ny sidina ho an'ny Boeing 737 MAX antsoina hoe Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Noho ny fitaka nataony, ny antontan-taratasy lehibe navoakan'ny FAA AEG dia tsy nanana firesahana momba an'i MCAS. Ho setrin'izany, ireo boky torolàlana momba ny fiaramanidina sy fitaovana fanofanana mpanamory fiaramanidina monina any Etazonia dia tsy nisy firesahana momba an'i MCAS - ary ireo mpanjifa fiaramanidina Boeing any Etazonia dia tsy nahazo fampahalalana manan-danja rehefa nanapa-kevitra sy namarana ny fanapaha-kevitr'izy ireo handoa ny Boeing amina tapitrisa dolara amina 737 MAX fiaramanidina.
"Forkner dia voalaza fa nanararaotra ny fahatokisany tamim-pahatokiana tamin'ny fitazomana ny vaovao marim-pototra momba ny MCAS nandritra ny fanombanana ny FAA sy ny fanamarinana ny 737 MAX ary avy amin'ny mpanjifa an'habakabaka Boeing any Etazonia", hoy ny mpisolovava lefitra jeneraly Kenneth A. Polite Jr an'ny Heloka bevava ao amin'ny Justice Justice. Fisarahana. “Tamin'izany no nanesorany ny seranam-piaramanidina sy ny mpanamory fiaramanidina tsy hahalala fampahalalana tena lehibe momba ny ampahany manan-danja amin'ny fifehezana ny sidina. Ireo mpandrindra toy ny FAA dia miasa lehibe hiantohana ny fiarovana ny besinimaro manidina. Na iza na iza mikasa hanakorontana ny asan'ny mpanara-dalàna, dia milaza mazava fa hanenjika ny zava-misy ny sampam-pitsarana ary hampamoaka anao. ”
"Tamin'ny fikasana hamonjy vola Boeing, Forkner dia voalaza fa nitazona fampahalalana tsikera avy amin'ireo mpanara-dalàna," hoy ny mpisolovava mpisolo toerana amerikana Chad E. Meacham ho an'ny Distrika Avaratra any Texas. “Ny safidiny feno habibiana mba hamitahana ny FAA dia nanelingelina ny fahafahan'ny maso ivoho miaro ny vahoaka manidina ary namela ireo mpanamory fiaramanidina ho very asa, tsy ampy fampahalalana momba ny fanaraha-maso sidina 737 MAX sasany. Ny Departemantan'ny Fitsarana dia tsy handefitra amin'ny hosoka - indrindra amin'ireo indostria avo loatra ny tsatoka. ”
"Forkner dia voalaza fa nitazona fampahalalana lehibe momba ny Boeing 737 MAX ary namitaka ny FAA, naneho tsy firaharahiana ny andraikiny sy ny fiarovana ny mpanjifa sy ny ekipa fiaramanidina," hoy ny Tale mpanampy Calvin Shivers avy amin'ny FBI. "Ny FBI dia hanohy hampamoaka ireo olona toa an'i Forker noho ireo fihetsika tsy marina nataony izay manimba ny filaminam-bahoaka."
"Tsy misy fialan-tsiny amin'ireo izay mamitaka ireo mpanara-maso ny fiarovana mba hahazoana tombony manokana na fanararaotana ara-barotra," hoy ny inspektera jeneraly Eric J. Soskin avy amin'ny Departemantan'ny fitaterana any Etazonia. “Miasa tsy tapaka ny biraonay mba hitazomana ny lanitra hilamina amin'ny sidina sy hiarovana ny besinimaro amin'ny loza tsy misy antony. Ny fiampangana anio dia mampiseho ny fanoloran-tenantsika tsy miovaova hiara-hiasa amin'ireo mpampihatra lalàna sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampanoavana mba hampamoaka andraikitra ireo izay mametraka ny ainy tsy ho zavatra. ”
Araka ny antontan-taratasin'ny fitsarana, nanomboka namolavola sy namidy ny 737 MAX i Boeing tamin'ny volana Jona 2011. Ny FAA AEG dia tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny ambaratonga farany ambany amin'ny fiofanana ho an'ny mpanamory fiaramanidina ilaina amin'ny fanamoriana ny 737 MAX ho an'ny zotram-piaramanidina monina any Etazonia, miorina amin'ny ny toetra sy ny halehiben'ny fahasamihafana misy eo amin'ny 737 MAX sy ny andiany teo aloha an'ny fiaramanidina Boeing 737, ny 737 Next Generation (NG). Tamin'ny famaranana ity fanombanana ity, ny FAA AEG dia namoaka ny 737 MAX Flight Standardization Board Report (FSB Report), izay nahitana, ankoatry ny zavatra hafa, ny famaritana fiofanana momba ny tsy fitovizan'ny FAA AEG ho an'ny 737 MAX, ary koa ny mombamomba ny fahasamihafana misy eo amin'ny 737 MAX sy ny 737 NG. Ny kaompaniam-pitaterana an-tserasera rehetra any Etazonia dia notakiana hampiasa ny vaovao ao amin'ny 737 MAX FSB Report ho fototry ny fampiofanana ny mpanamory fiaramanidina mba hanidina ny fiaramanidina.
Amin'ny maha-lehiben'ny mpanamory teknika an'i Boeing 737 MAX, Forkner dia nitarika ny ekipa teknikan'ny sidina 737 MAX ary tompon'andraikitra tamin'ny fanomezana ny FAA AEG fampahalalana marina sy marina ary feno momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny 737 MAX sy ny 737 NG ho an'ny fanombatombanana, fanomanana ny FAA AEG. ary famoahana ny 737 MAX FSB Report.
Tamin'ny volana novambra 2016 sy teo ho eo dia nahita vaovao momba ny fanovana lehibe ho an'ny MCAS i Forkner. Raha tokony hizara vaovao momba an'ity fanovana ity amin'ny FAA AEG i Forkner dia nilaza fa niniana nitazona izany vaovao izany izy ary namitaka ny FAA AEG momba ny MCAS. Noho ny fitaka nataony, ny FAA AEG dia namafa ny referansa rehetra momba ny MCAS tamin'ny kinova farany an'ny 737 MAX FSB Report navoaka tamin'ny Jolay 2017. Vokatr'izany, ireo mpanamory fiaramanidina nanidina ny 737 MAX ho an'ny mpanjifa an'habakabaka Boeing any Etazonia dia tsy nomena fampahalalana. momba ny MCAS ao amin'ny boky torolàlana sy fitaovam-piofanan'izy ireo. Forkner dia nandefa kopian'ny tatitra 737 MAX FSB ho an'ny mpanjifa fiaramanidina 737 MAX any Boeing, saingy nitazona tamin'ireto mpanjifa ireto fampahalalana manan-danja momba ny MCAS sy ny fizotran'ny 737 MAX FSB Report.
Tamin'ny 29 Oktobra 2018 teo ho eo, taorian'ny nahafantaran'ny FAA AEG fa ny Lion Air Flight 610 - 737 MAX - dia nianjera tany akaikin'i Jakarta, Indonezia, fotoana fohy taorian'ny fiaingana ary MCAS dia niasa tamin'ny fotoana nialohan'ny fianjerana, dia hitan'ny FAA AEG ny fampahalalana momba ny fanovana manan-danja amin'ny MCAS izay notanan'i Forkner. Rehefa nahita io fampahalalana io dia nanomboka nandinika sy nanombatombana ny MCAS ny FAA AEG.
Tamin'ny 10 martsa 2019 teo ho eo, raha mbola nandinika ny MCAS ny FAA AEG, dia fantatry ny FAA AEG fa ny Ethiopian Airlines Flight 302 - a 737 MAX - dia nianjera tany akaikin'i Ejere, Etiopia, fotoana fohy taorian'ny fiainganana ary MCAS dia niasa tamin'ny fotoana vitsy talohan'izay. ny fianjerana. Fotoana fohy taorian'io fianjerana io dia nidina tany Etazonia daholo ny fiaramanidina MAX 737.
Forkner dia voarohirohy amin'ny fisolokiana roa mahatafiditra ny ampahan'ny fiaramanidina amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny hosoka efatra amin'ny tariby. Antenaina izy hanatrika ny fitsarana voalohany amin'ny zoma any Fort Worth, Texas, eo alohan'ny mpitsara amerikana Jeffrey L. Cureton ao amin'ny tribonaly amerikana ho an'ny distrika avaratry Texas. Raha voaheloka izy, dia iharan'ny sazy mihatra 20 taona an-tranomaizina amin'ny isa amin'ny hosoka tariby ary 10 taona an-tranomaizina isaky ny fanodikodinam-bola misy ny ampahan'ny fiaramanidina eo amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny mpitsara amin'ny distrika federaly dia hamaritra izay sazy aorian'ny fandinihany ny torolàlana momba ny fanamelohana amerikana sy ireo anton-dalàna hafa.
Ny biraom-paritry ny FBI any Chicago sy ny DOT-OIG dia manadihady ny raharaha, miaraka amin'ny fanampian'ny biraon'ny FBI sy DOT-OIG hafa.
Ny mpisolovava amin'ny fanandramana Cory E. Jacobs, ny Lehiben'ny mpanampy Michael T. O'Neill, ary ny mpisolovava an'ny fitsarana Scott Armstrong avy amin'ny seksiona mpisoloky ny fizarana heloka bevava, ary ny mpisolovava amerikana mpisolo vava Alex Lewis avy amin'ny biraon'ny mpisolovava amerikana ho an'ny distrika avaratry Texas dia manenjika ny raharaha.
Ny fiampangana dia fiampangana fotsiny ihany, ary ny voampanga rehetra dia heverina ho tsy manan-tsiny mandra-pahatongan'ny fanamelohana azy mihoatra ny fisalasalana misy ao amin'ny fitsarana.
Kopian'ny fiampangana marina: